Hitan'ny NASA vongan-dranomandry mahitsy tanteraka any Antarctica | Famoronana an-tserasera
Voalaza hatrizay fa ny litera mahitsy ihany no noforonina amin'ny tanan'ny olona ihany, saingy toa tsy izany no izy noho ny zavatra hita nampahafantarin'ny masoivoho NASA any Etazonia tamin'ity herinandro ity.
Ary io no nahitan'i NASA a ranomandry mahitsizoro tanteraka ao amin'ny Antarctica talanjona ny rehetra. Rehefa imbetsaka dia toa fantatsika ny zava-drehetra, dia miseho ny zava-misy tahaka ity izay mahatonga antsika ho gaga.
Ny tsipika mahitsy dia ampahany amin'ny maritrano, toa an'i Ando, ary amin'ireo tetik'asa maro izay misy ny olombelona dia nanosika foana hilaza fa io fehezan-teny io dia nanonona fehintsoratra roa lasa izay. Fa raha miantehitra amin'izay hitan'ny mpahay siansa Jeremy Harbeck tamin'ny masony isika, dia nivadika ambony ambany ny zava-drehetra mba hamela antsika ho very hevitra tanteraka.
Isika izay tia andalana betsaka Na izany na tsy izany, ny mahita azy ireo eo afovoan'ny natiora dia hetsika iray izay tsy azontsika tsinontsinoavina. Ary io dia Operation IceBridge, nanomboka tamin'ny 2009 ary inonaary miandraikitra ny fanaraha-maso miova daholo ny ranomandry polar, izay nahitana an'io fahitana tsy mampino io.
Tsy mbola nisy toy izany ny volam-boasary teo aloha, izay misy zoro roa amin'ny zoro toa izany. Ity iceberg ity dia miorina eo akaikin'ny iceberg A68, fananganana ranomandry iray izay tapaka avy lehibe kokoa antsoina hoe Larsen C tamin'ny 2017.
Ny A68 dia iray amin'ireo icebergs lehibe indrindra voarakitra miaraka faritra mihoatra ny 5,6 kilometatra. Azonao atao ny mahita sary hafa mampiseho fa tsy ny lafiny rehetra dia tonga lafatra ary tsy dia mahitsizoro loatra izy io, fa amin'ny fizarana voalohany dia mamela antsika ho talanjona amin'ilay tsipika mahitsy izay mandeha an-jatony sy metatra an-jatony maro izy.
Un tsy re akory eo afovoan'ny Antarctica mamela izany amin'ny fisalasalana fa ny tanan'olombelona ihany no mahavita mamorona tsipika mahitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Tsipika mahitsy eo amin'ny natiora: Nahita vatolampy mahitsizoro any Antarctica i NASA